Usodolophu wase-Italiya usoyikisela ukuthumela amalangatye ukuba alwe ne-coronavirus: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Matshi 2020	• 14 Comments
Buyintoni na ubunyani bolawulo obusasazwa kwezopolitiko nakusasazo ngokudibeneyo ne nenkcaso? Qaphela uphawu lomnyama. Ngaba umnyama ngokufihlakeleyo ngumqondiso womyalelo wehlabathi elitsha? Ngaba umhlaba uzele ngumkhukula wecoronali njengakwimihla kaNowa? Kwenzeka ntoni emva koMkhukula? Umnyama?
"Sithumela abacimi bomlilo!" Uyakhwaza lo sodolophu wase-Itali.
Ngoku sicinga ukuba asizukuyithatha ngokoqobo le nto, kodwa kuthekani ukuba oku kuyakwenzeka ngokoqobo? Jonga ulwimi olothusayo olusuka emlonyeni wale sodolophu. Ngaba uMphathiswa uGrapperhous naye uza kuqala ukujongana ne-coronavirus 'njengongalawulekiyo' kwaye 'iphuma ezandleni' ngemithombo yeendaba? "Kuba awumameli kwaye awuhlali ngaphakathi!"
Uyakhumbula esi silumkiso ukusukela ngoNovemba ka-2019?
Kwincwadi yam kunye namanqaku amaninzi (afundwayo simahla) apha kule ndawo ndiyichaze ukuba umnyama luphawu loThixo womyalelo wehlabathi elitsha: Lucifer. Ulungelelwano lwehlabathi elitsha lilwela umhlaba ngokufana noLucifa. Isimboli sikaLusifa yiBaphomet: i-hermaphrodite (androgynous okanye 'sex neutral') ye-chimera Bike (ifundwe nantsi into ethile yokubulala i).
Ndamnqanda ndathi, 'Jonga, le asiyiyo imovie. Awuyena uWill Smith kwi-I Am Legend. Goduka. "
Le yinkqubo eqokelelweyo yoosodolophu base-Italiya belahlekelwa ngabantu abophula umthetho # I-Covid19 ukuhlala yedwa. Ewe izihlokwana zichanekile. pic.twitter.com/60V4Csuonb
-🌈 (@protectheflames) Matshi 22, 2020
UVincenzo De Luca, uSodolophu wedolophu yase-Italiya yaseCampania
tags: dolophu, coronavirus, de, eziziimbalasane, IsiTaliyane, EItali, Luca, ukukhusela, rainbow, incwadi yemvula, le, Vincenzo, Abasebenzi bamadangatye
26 Matshi 2020 kwi-10: 26
Ixesha esikulo ngoku? Imizuzu 3:17 kwividiyo
26 Matshi 2020 kwi-23: 49
Ndicinga kwangaphambili ngentsimbi ye-3: 30 kusasa xa umntu esongela ukuba uza kuhlaselwa yenye yeempawu zeCorvid.
26 Matshi 2020 kwi-11: 30
Dlala eminye imidlalo yevidiyo, utsho omnye wamagosa anyanzelisa umthetho.
Ezinye izazi, kubandakanywa ne-WHO, ngoku zithi "umdlalo oqinisekileyo wokwenyani" uyavela apho yonke "imidlalo" iphuculweyo kwaye iphuculwe kakhulu, nabantu kwigumbi labo lokuhlala abanyanzelekileyo okanye abo babizwa ngokuba “ngabokuzithandela” bodwa Umhlaba ungashukuma ungabonakali kwinto yokwenyani. Nditsho neenkqubo zokufundisa zinokufundelwa abantwana kwihlabathi elivulekileyo ukuze kwixesha elizayo bangabe besayi esikolweni kodwa baye “kwigumbi lokufundela” apho banokufumana khona izifundo nabanye abantwana kutitshala obenolwazi oluqinisekileyo, kwaye yintoni engeyiyo eyokwenyani iyabonakala.
Kuyathethwa ukuba kulindeleke ukuba kwixesha elizayo abantu basenokuya kuhlala bodwa ngokusisigxina kuba intsholongwane iqhubeka ukuphuma, kodwa ngokwenyani eyiyo le ngxaki ayisiyongxaki konke konke kwaye abantu abasayi kufuna nokuya ngaphandle ngenxa yehlabathi elibonakalayo apho banokudibana konke konke ngokungaziwa kwinto yokwenyani.
Ke i-transhumanism ikwaphakanyiswa kakhulu ngezi zinto kuthiwa ziitshixo kunye nokuzimela kwaye kungekudala iya kuba yinto eqhelekileyo kwaye kakhulu kakhulu phambili.
26 Matshi 2020 kwi-12: 03
Kwaye abancinci ngoku bafundiswe indlela yokulandela iibhele. Guqula ezi mabhele 'ngezinto ezisongelayo' kwaye ubona ntoni kulolo hlelo?
26 Matshi 2020 kwi-13: 00
Abongikazi kunye nabantu abanemisebenzi ebalulekileyo abanomkhuhlane banokusebenzela nje ngokulula.
26 Matshi 2020 kwi-13: 24
Uninzi lwamakhaya athatha umhlala-phantsi eNetherlands aneqhosha lekhonkco ngaphandle kweminyango ethile. Kwimeko enjalo, umntu omdala akanokwazi ukuvula ucango ngaphakathi. Itekhnoloji yale mihla. Ukuba i-coronavirus ikrokrelwe, umnyango ungavalwa. Ngokwesiqhelo kukho indawo yokugcina izidumbu kufutshane nekhaya lokugcina abalupheleyo. Emva kwayo yonke loo nto, ihlala isitishi sokugqibela. Abantwana abasenakho ukundwendwela. Ukutshixa. Ngethamsanqa, banokuxhomekeka kukhathalelo oluhle. Abongikazi banamathela ngokucokisekileyo kwiprotocol kwaye kunokwenzeka ukuba bagcine abantu abadala abosulelekileyo kwigumbi labo .. kungenjalo ubaleka umngcipheko wokosuleleka (kwaye kufuneka uvalelwe) okanye ukuba abanye abantu abadala bosulelekile ... awufuni loo nto. Indlela ebuyela kwelebhu ngamanye amaxesha ithi "coronavirus positive". Iyacaphukisa into yokuba ukuvala umntu okhulileyo kube njalo, kodwa ewe .. ”Imele ukuba ayisiyolo, kodwa ngubani onokuphikisa iziphumo zelebhu? Unamathela kumgaqo ... ”
Inokwenzeka njani iHarry Mens?
26 Matshi 2020 kwi-13: 26
26 Matshi 2020 kwi-15: 39
Ewe, uVincenzo de Luca. Ngaba ikhona enye. Bakwizikhundla eziphambili e-Italy. Yonke into iququzelelwa ngaphakathi kwaye iqondiswe nguHen. Babona yonk'into, Bazimisela yonke into, Bayinto eqhelekileyo, Bangamagqirha, Ngamajelo eendaba, Bangamandla aqinileyo, njl njl. Njani thina, bantu baqhelekileyo, sahlukane nabo?
Ukuba ngumntu wabhala wathi:
26 Matshi 2020 kwi-17: 34
Okokuqala ndingathanda ukubulela ngamanqaku amaninzi anokuqonda kwiminyaka edlulileyo. Ukuxhasa umsebenzi wakho, kodwa kwanomxholo wencwadi, ndawuyalela. Ndiyathemba ukuba wonke umntu osemhlabeni unokujonga esipilini ukuba wenza ntoni kwaye azibuze ngokunzulu ukuba buyintoni na ubomi.
Ndinqwenela wonke umntu amandla, ubulumko kunye nempilo yonke ngeli xesha lixakekileyo.
26 Matshi 2020 kwi-22: 40
Ukuvavanyelwa intsholongwane kaCorona kukuqhatha!
27 Matshi 2020 kwi-07: 09
Isiqwenga nje esibalulekileyo kwikhonkco nge-jhonny iqhotyoshelwe.
I-CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) yeXesha le-RT-PCR yeXesha leXesha luvavanyo lwe-RT-PCR yexesha elifanelekileyo elungiselelwe ukufunyanwa komgangatho weasistic ye-nitic acid ukusuka kwi-2019-nCoV kwimimodeli ephezulu yokuphefumla. i-nasopharyngeal okanye i-oropharyngeal swabs, i-sputum, i-aspirate esezantsi yokuphefumla, i-bronchoalveolar lavage, kunye nokuhlamba kwe-nasopharyngeal / i-aspirate okanye i-nasal aspirate) eqokelelwa kubantu abadibana ne-2019-nCoV yonyango kunye / okanye i-epidemiological (umzekelo, iimpawu zekliniki kunye neempawu ezinxulumene ne-2019- Ukosuleleka yi-nCoV, ukunxibelelana nomntu onokwenzeka okanye oqinisekisiweyo we-2019-nCoV, imbali yokuhamba kwiindawo ngeendawo apho kwafunyanwa khona iimeko ze-2019-nCoV, okanye ezinye amakhonkco ezinxibelelanisayo apho uvavanyo lwe-2019-nCoV lunokuboniswa njengenxalenye yophando loluntu lwempilo). Ukuvavanywa e-United States kukhawulelwe kwiilebhu eziqinisekisiweyo phantsi koLungiso lweeMeko zeLabhoratri yoPhuculo lwe-Clinical yowe-1988 (CLIA), ye-42 USC § 263a, ukwenza iimvavanyo ezintsokothileyo eziphezulu.
Iziphumo zokuchongwa kwe-RNA ka-2019-nCoV. I-RNA ye-2019 nCoV iyabonakala ngokubanzi kwimimodeli yokuphefumla ephezulu nangaphantsi ngexesha losulelo. Iziphumo ezifanelekileyo zibonisa usulelo olusebenzayo nge-2019-nCoV kodwa ungalukhupheli usuleleko lwebhaktiriya okanye usulelo kunye nezinye intsholongwane. Iarhente efunyenweyo isenokungabi sesona sizathu sokugula. IiLabhoratri ngaphakathi eUnited States nakwimimandla yayo ziyafuneka ukuba zinike ingxelo kwiziphumo ezifanelekileyo kumagunya ezempilo oluntu.
Iziphumo ezingalunganga azithinteli usulelo lwe-2019-nCoV kwaye akufuneki zisetyenziswe njengesiseko sonyango okanye ezinye izigqibo zolawulo lwesigulana. Iziphumo ezingalunganga kufuneka zidibaniswe nokuqwalaselwa kweklinikhi, imbali yesigulana, kunye nolwazi lwesahlo.
Asizuzi lukhulu kuvavanyo lwentsholongwane. Isenziwa njani isicwangciso sonyango, kwaye ngawaphi amayeza asetyenziswa? Inkqubo? Kufana nokuvavanywa kwezigulana ngabagqirha kwaye ukubona ukuba loluphi na unyango. Umbuzo kukuba abaguli abaguli ngakumbi ngenxa yoku. Qonda ukuba oogqirha kunye nabongikazi abasoloko benxiba imask kwaye ke banokudlulisela isifo / isifo kwizigulana ezinokubakho ze-corona. Kwaye ngamanye amaxesha bayaqhubeka besebenza ngelixa bona ngokwabo benekona. Ngaba abaguli ekugqibeleni baya kufa nge-corona okanye enye into? Cui bono? Ngokuchanekileyo, iinjineli zehlabathi ezaphuculayo.
27 Matshi 2020 kwi-00: 36
@ martin Ukongeza (kwisakhelo) sophawu kumyalezo, jonga kwakhona ulwimi lomzimba / ukubonakalisa ubuso kwezi nkokeli okanye abaguli.
Ukungabikho kwemvakalelo kunye nesazela, injongo yenyani ichazwe ebusweni
Ikwayadume noko intliziyo egcwele ...
Intliziyo yeLuciferian ibonakalisa ngokwamehlo / ukubonakalisa ubuso kunye nolwimi lomzimba.
Ngenxa yobukho be "ndawo angaboniyo" kwi-mindset yethu, sicinga (siwela iingcebiso) ukuba umntu onobuhlobo ngumntu onobuhlobo / wentliziyo. Intsingiselo eyinyani yexabiso lobuso.
Sifikile ngexesha apho ubuqu (Persona = imaski) bubonisa ubuso babo bokwenyani.
Olu nxibelelaniso lubonelela ngokukhokelela okunzulu kunye nemizekelo. Ukuqatshelwa kobuso ngokusazi.
Kwi-sidenote: I-AI yimbono engaqhelekanga kakhulu okanye ikopi yezakhono zabantu. Ikhompyuter ayimfuneko (h) ukuqonda eyinyani. Kodwa okoko umntu ngamnye engasibuyisanga isazisi sakhe sokwenyani (i-mindset), uya kuqhubeka nokucela igunya langaphandle.
28 Matshi 2020 kwi-07: 33
« I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.197.308
Future op Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi
UHarry makhulu op I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Ikhamera 2 op Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi
UFrank Holland op Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi